अर्बौ डलर खर्चेर खोप बनाउने होड, कहिले पुरा होला विश्वभरको प्रतिक्षा ? – Mission Khabar
अर्बौ डलर खर्चेर खोप बनाउने होड, कहिले पुरा होला विश्वभरको प्रतिक्षा ?
मिसन खबर २ भाद्र २०७७, मंगलवार ०६:२९
एजेन्सी, काठमाडौं । कोरोना भाइरस कोभिड–१९ विरुद्धको खोप बनाउने दौडधुप जारी छ । दर्जनौं शोधकर्ताको टोली खोप बनाउन क्रियाशिल छन् । स्थापित र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर गरिएको खोपको खोजीमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी भइरहेको छ । वैज्ञानिकहरु एक वर्षभित्रै कोभिड–१९ विरुद्ध खोप तयार गर्ने दौडमा देखिदा अर्बौ डलर लगानी गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै लगानी अमेरिका, युरोप र चीनबाट भएको देखिन्छ ।
ट्याग : #breaking, #hot, #कोरोना बिरुद्धको खोप, #कोरोना भाइरस, #कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप, #क्लिनिकल परीक्षण, #खोप परीक्षण र विकास, #विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)